पब्जी पार्टनरसँग बिहे गर्न पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव ! - Gandak News
पब्जी पार्टनरसँग बिहे गर्न पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव !
गण्डकन्यूज द्वारा ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १९:१९ मा प्रकाशित 0
एजेन्सी। इन्टरनेट गेम पब्जी खेल्ने पार्टनरसँग बिहे गर्नका लागि एक युवतीले आफ्ना पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव गरेको घटना बाहिर आएको छ । यो खेल विश्वभर बालबालिका, युवायुवतीमा लोकप्रिय छ । यस्तो घटना भारतको गुजरात राज्यस्थित अहमदावादमा सार्वजनिक भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
एक १९ बर्षिया युवतीले त्यहाँको महिला हेल्पलाइन अभयममा फोन गरी पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गराइदिन सहयोग मागेकी थिइन् । त्यसक्रममा कारणचाहिँ पब्जी खेल्ने साथीसँग बिहे गर्ने बताइन् । उनकी एक बर्षभन्दा कम उमेरकी एक छोरी समेत रहेको बताइएको छ ।
‘एउटा उच्च परिवारमा रहेकी महिलाले यस्तो अचम्म लाग्दो प्रस्ताव गरिन् । हामी छक्क परेका छौं’, महिला सेलका अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यहाँकी काउन्सलरले भनिन्,‘युवतीले बिहे गरेकी छन् । उनको बिहे एउटा विल्डिङ कन्ट्रयाक्टरसँग १८ बर्षको उमेरमा भएको थियो । उनले आफ्नो प्रस्तावपत्रमा केही महिना पहिला पब्जी खेल्न सुरु गरेकी र सहरका एक एक्टिभ युवासँग परिचय भएको खुलाएकी छन् ।’
काउन्सिलर सोनल सगाथियाले जब युवतीसँग सोधिन कुनै कुरामा विवाद भएको थियो ? युवतीले नभएको उत्तर दिँदै भनिन्,‘मेरो इच्छाचाहिँ त्यो व्यक्तिसँग बस्ने छ जोसँग म सँधै कुरा गर्छु । पब्जी पार्टनरसँग कुरा गरेका कारण ति युवतीको पतिसँग झगडा पनि भएको थियो ।
त्यसपछि उनले घर छाडी माइत गइन् । सम्बन्ध विच्छेदको यो प्रस्ताव उनका पतिले अस्वीकार गरेका छन् । ति महिलालाई उक्त प्रस्तावमा विचार गर्न भनिएको छ । पब्जीको लतबाट बाहिर निकाल्नका लागि मनोचिकित्सककोमा जान सुझाव पनि दिइएको छ ।
नवलपुरको देवचुलीमा थप दुई जनालाई कोरोना संक्रमण,…
जापानमा थप एक महिना आपतकाल लम्ब्याउने…
बलिउड अभिनेता इरफान खानको ५४ वर्षको…